Nhau - Isu tazara nekuvimba mune ramangwana rekumisikidza indasitiri
Pakupera kwe17th China International Stationery uye Zvipo Fair (Ningbo Stationery Fair) muna Chikunguru gore rino, takaona kuti sedanho rekutanga rekuremekedza pasirese kubvira pakatanga denda, data rezviratidziro zvakasiyana richiri kusvika yakakwirira itsva. Panguva imwecheteyo, chiitiko ichi chakatyora miganho yenguva nenzvimbo, uye makambani ekunze munzvimbo dzinoverengeka pasirese haana kusiya misha yavo "gore" kunotaurirana nevaratidziri. Ngatizadziswe neruzivo nezveramangwana kuvandudzwa kwema stationery indasitiri.
Semutambo wepagore wekumisikidza zvakatangazve mushure mekupararira kwedenda, chiratidziro chakasvika kurekodha zvakakwirira uye kumisikidza runyorwa nyowani rweindasitiri yekumisikidza mudunhu reAsia-Pacific. Mune huwandu hwakawanda hwemakumi matatu emazana emamirimita emahofisi mashanu ekuratidzira, huwandu hwemabhizimusi e1107 kutora chikamu muchiwoniso, akamisa matumba 1,728, vashanyi 19,498.
Varatidziri ava vaiuya kubva kumatunhu gumi nemana nemaguta anosanganisira Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Shanghai, Shandong neAnhui, uye mabhizinesi kubva kuWenzhou, Duan, Jinhua nedzimwe nzvimbo shanu dzinoburitsa zvinhu zvekumiririra mudunhu reZhejiang vakapinda muchiratidziro. Ningbo emakambani aive ne21% yehuwandu. Mu yiwu, Qingyuan, Tonglu, Ninghai nedzimwe nzvimbo dzekugadzira zvigadzirwa, hurumende yemuno ichatungamira kuronga nekuunganidza mabhizinesi munzvimbo iri pasi payo kuti vatore chikamu muchiratidziro mumapoka.
Varatidziri vakaunza makumi ezviuru zvezvigadzirwa zvitsva, zvakafukidza hofisi yedesktop, maturusi ekunyora, zvigadzirwa zvehunyanzvi, zvekushandisa zvevadzidzi, zvekushandisa muhofisi, zvipo, zvigadzirwa zvekumisikidza uye zvigadzirwa zvekugadzirisa uye zvikamu, zvinosanganisira zvikamu zvese zveindasitiri yekumisikidza uye kumusoro uye kuzasi kwemaindasitiri cheni.
Nekuda kwekukanganiswa nedenda iri, mazhinji enzvimbo huru dzekumisikidza vakapinda chiratidziro pamwechete. Mune ino Ningbo stationery kuratidzira, kuwedzera kumapoka kubva Ninghai, Cixi, Wenzhou, Yiwu, Fenshui uye Wuyi, Qingyuan Bureau of Commerce uye Qingyuan Penzura Industry Association akaronga 25 anokosha mabhizimisi akadai Hongxing, Jiuling, Meimei uye Qianyi kutora chikamu pashoo kekutanga. Guta reTonglu Fenshui, rinozivikanwa se "guta rekuChinese rinogadzira", super saizi chipo chinyoreso "Tiantuan" yakaonekwawo mune ino stationery kuratidzira, kuitira kuburitsa iyo brand chinangwa che "rega yepasirese capita peni".
Ningbo stationery inoratidzira indasitiri iri zvakare yekutanga pane "gore". Iyo mraba yekuratidzira horo yakagadzwa mumuseum kuti ibate chaiyo-nguva yekutenga online matchmaking. Vazhinji varatidziri vanoungana mugore, uye vamwe varatidziri vanotsvaga nzira nyowani ne "live live" uye "gore nezvinhu". Ningbo Stationery inoratidzira nzvimbo yakagadzika yakakosha network network uye Zoom vhidhiyo yemusangano kamuri kuti ione kutaurirana kumeso pakati pevatengi vekunze uye mabhizinesi epamba. Iyo data yakaunganidzwa ipapo inoratidza kuti vatengi makumi maviri nevatatu kubva kumhiri kwemakungwa vanobva kunyika makumi mana nematanhatu nematunhu epasi rese vachabata doko rekumisidzana nevatengesi vari kutora chikamu muna 2007.